DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-12AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos” | Laashin iyo Hal-abuur
DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-12AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos”
Xayeysiintu waa nooc dacaayad ganacsi ah oo loo sameeyo kor u qaadidda iibinta wax soo saarka ama adeeg iyada oo la adeegsanayo warbaahin kala duwan, farriintana waxaa lagu gaarsiiyaa qaab boos lacag ah. Tusaale ahaan, farriintu waxay ka koobnaan kartaa qoraal iyo muuqaal waxaana loola jeedaa koox bartilmaameed gaar ah leh. Marka loo eego tarjumaad ballaaran xayeysiinta, sidoo kale waxaa loola jeedaa faafinta koox dano ah fikradaha iyo qiyamka hadba waxa la doonayo in la baahiyo si loo iibsado.
Ujeeddada xayeysiinta ayaa ah in suuqa galiyo wax soo saarka ama adeegyada shirkadda iyadoo ujeeddadu tahay in saameyn lagu yeesho dabeecadaha qofka macaamilka ah lana abuuro xiriir lala yeesho macaamiisha. Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu gaari karo saameyn iyada oo loo marayo xayeysiinta marka loo qaabeeyo si waafaqsan shuruucda gaarsiinta si aad u ballaaran. Xayeysiintu waxay ku saabsan tahay muujinta faa’iidooyinka badeecad ama adeeg, tusaale ahaan iyada oo la isbarbardhigo kuwa la tartamaya, lana muujiyo faa’iidooyin wax ku ool ah oo lala leeyahay ama la muujiyo dhibaatooyinka soo raaca iyo xaaladda bulsho ee ay bixiso markaas.
Xayeysiintu waxay ka mid tahay isgaarsiinta ujeeddadeeduna waxay tahay inay ku wargeliso macaamiisha mustaqbalka waxyaabaha ku saabsan alaabada iyo adeegyada iyo sida ay u isticmaali lahaayeen una heli lahaayeen. Warbaahinta badankood maanta waxay u shaqeeyaan sidii marin loogu talagalay farriimahaan. Telefishanka, raadiyaha, filimada, wargeysyada, ciyaaraha fiidiyowga, internetka iyo looxyada wargeysyada ayaa tusaale u ah kannaallada. Xayeysiintu badanaa waxaa dhiga wakaaladda xayeysiinta oo ka wakiil ah shirkad. Ii oggolow inaan sooyaalka xayeysiinta ee hal waddan kula wadaago, si aan tusaale guud uga qaadanno.
Taariikhda xayeysiinta Iswiidhan:
Ereygu wuxuu ka yimid Jarmalka “reklame” oo ka yimid Faransiiska “réclame” wuxuuna ku jiray luqadda Iswidishka ilaa 1831-dii. Nooca ugu da’da yar uguna fudud ee xayeysiintu waa habka “ereyga afka”, yacni xan ayaa dadka ku dhex faafta wax soo saar ama adeeg. Faafintaan xanta ayaa lafdhabar u ah qeyb weyn oo ka mid ah xayeysiinta, gaar ahaan marka ganacsiyadu ay doonayaan inay dhisaan astaan adag ayna xoojiso sumcadda shirkadda ama muuqaalkeeda. Markii luuqad qoran, buugaag iyo daabacaadda buugaagta dambe la allifay, waxaa la soo kordhiyay fursadda macaamiisha loogu mari karo waddooyin cusub. Qaabka fiican ee loo suuq geeyo ayaa ahayd in la isticmaalo sawirrada si looga wargeliyo qofka ganacsigiisa. Kabuhu wuxuu sameyn karaa: calaamado muujinaya kabo ka baxsan aqoon isweydaarsigiisa. Markaa waxaa suurta gashay in la soo saaro fariin xayeysiin ah oo la keydin karo lana rari karo lana gaarsii karo dad aad u tiro badan waqtiyo iyo goobo kala duwanna jooga. Horumarinta xayeysiintu waxay ka billaabantay dunida reer galbeedka intii lagu jiray qarnigii 19-aad markii akhriska iyo dhigaalku ay kordheen. Wargeysyada iyo joornaallada ayaa daabacay xayeysiis waxayna billaabeen inay u isticmaalaan lacagaha soo gala dhaqaalahooda. Xayeysiinta bannaanka, gaar ahaan magaalooyinka, ayaa kordhay, intii lagu jiray qarnigii 20-aad. Warbaahin cusub ayaa ku timid qaab raadiye, TV, filim, internetka iyo aalado kale oo dijitaal is-dhexgal ah.
Isla mar ahaantaana, cilmi baaris ayaa laga sameeyay agagaarka xayeysiinta, casharradu waxay ka yimaadeen sayniska habdhaqanka sida cilmi-nafsiga iyo cilmiga bulshada. intii lagu jiray qarnigan, aqoonta ayaa korodhay sida xayeysiintu door muhiim ah uga ciyaari karto iibka shirkadaha. Laga soo billaabo: 1980-yadii iyo wixii ka dambeeyay, xayeysiinta sii kordheysay ayaa lala xiriirinayaa horumarinta sumadaha shirkadaha. Waxay sidoo kale macnaheedu tahay in isgaarsiinta suuq-geynta ee ballaaran ay noqotay mid aad muhiim ugu ah qabashada xaddiga aagagga iyo waxqabadyada horay loogu tilmaamay xayeysiinta. Tusaale cad oo ku saabsan isbeddelkaani waa ururka Xayeysiinta Iswiidhan oo sannadkii 2009 u baddalay magaceeda Sveriges Kommunikationsbyråer (Wakaaladda isgaarsiinta ee Sweden).
Ujeeddada xayeysiintu waa in la abuuro farriimo dadka ka dhiga inay wax cunaan. Farriimaha ayaa sidaas oo kale ula mid ah macaamiisha kuwa cusub ee mustaqbalka iman kara ee la xiriira alaabada shirkadda. Alaabtu waxay noqon kartaa badeecad, sida baabuur ama shay dhar ah. Badeecadu sidoo kale waxay noqon kartaa adeeg, sida caymiska ama hagaajinta gaariga. Hal dariiqo oo lagu gaaro koox bartilmaameed ah waxay noqon kartaa in lagu bartilmaameedsado dadka saamaynta bulsheed ku leh hareerahooda. Macaamiishaas waxaa badanaa loogu yeeraa cosmopolitans waxayna inta badan firfircoon yihiin oo bulsho ahaan ku wajahan gudaha, tusaale ahaan, koox saaxiibtinimo ama koox shaqo. Waxaa loogu yeeraa hal-abuurayaal qaabka habka korsashada ee wax soo saar, waana macaamiisha inta lagu jiro wajiga hordhaca ee wareegga nolosha badeecada doorta inay iibsadaan adeeggaas. Aragtida bulshada, qiyamka iyo caadooyinka isticmaalku had iyo jeer waxaa qabta hareeraheeda.
Inta badan xayeysiinta oo dhan waa xayeysiis macluumaad ah oo macnaheedu yahay helitaanka macaamil, qaataha, si loo ogaado alaabooyin cusub, loo dhiso astaan sumcad leh suuqa lana soo gudbiyo qiimaha macaamiisha. Sawirka astaanta adag ayaa muhiim u ah alaabada qaarkood, sawirku waa aragtida macaamilka ee sheyga, badiyaa ku xiran astaanteeda. Alaabada qaaliga ah sida gawaaridu waxay ku xirantahay muuqaal adag, halka badeecooyinka sida dhaqsaha badan loo cuno iyo kuwa raqiiska ah sida xanjada ay aad ugu tiirsanyihiin sumad adag oo uu macaamilku ku dooran karo. Haddii soo diraha uu la kulmo tartan, xayeysiinta qancinta ayaa laga yaabaa inay ka sii muhiimsan tahay. Xayeysiinta ayaa looga dan leeyahay in lagu qanciyo macaamiisha in wax soo saarka shirkaduhu ay yihiin kuwa ugu fiican suuqa, si looga dhigo macaamiisha inay si toos ah u iibsadaan wax soo saarkooda, isla markaana loo wanaajiyo muuqaalka shirkadda.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo xayeysiin ah waxaana loogu talagalay qaabab kala duwan oo ku xiran hadba nooca dhexdhexaadka ah, yacni kannaalka aad dooratid inaad ku gaadho. TV-ga, raadiyaha iyo xayaysiinta wargeysyada ayaa ah tusaalooyinka qaarkood. Xayeysiintu waxay u qaybsan tahay laba qaybood oo waawayn, xayeysiisna leh soo diraha cad iyo xayeysiinta qarsoon. Ku xayeysiinta qof diraa cad ayaa sidoo kale ku cad ujeedkiisa oo ah in macaamiisha ay iibsadaan wax soo saarkooda iyadoo aan loo eegin xayeysiinta qarsoon ee ku adag macaamiishu inay ogaadaan.
Xayeysiinta aan tooska ahayn:
Xayeysiinta aan tooska aheyn waa xayeysiinta aad ogtahay inay jirto iyadoon shirkad run ahi suuq geyn. Tusaale ahaan, Apple waxay leedahay summad aad u xoog badan, wax soo saarkooduna uu soo jiidasho badan yahay iyagoon suuq badan lahayn. Summaddaas ayaana sababeysa si ay uga soocnaato tartamayaasheeda sidaasna ay isu muuqato. Jalleecada hore ee sumadda, annaga bani-aadamka ah waxaan si toos ah u soo qaadaneynaa gabagabo ku saleysan waxa aan nafteenna u maleyno. Tan waxaa lagu soo koobi karaa iyadoo ay tahay dadka go’aamiya awoodda astaanta, iyadoo lagu saleynayo waxaan ognahay, aragnay oo aan maqalnay astaanta muddo dheer. Tani waa xayeysiin aan toos ahayn. Tani waxay u dhacdaa siyaabo kala duwan marka ay dadku wada hadlaan. Waxa aad saameyn ku wada yeelaneysaan idinka oo ka wada hadlaya wanaag ama xumaan ku saabsan wax soo saar, adeeg shirkadeed, sidaa darteedna aad u xoojineysa ama hoos ugu dhigeysa qiimaha shirkaddu u leedahay dadkaas .
Dhiirrigelinta iibka waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay dadaal muddo-gaaban ah oo lagu dhiirrigelinayo iibsashada ama iibinta alaab ama adeeg. Tan waxaa ku jira qiimo dhimis, dalabyo gaar ah, rasiidyo iyo bannaanbaxyo, iwm. Waxaana dhacda inay si joogto ah u siiso macaamiisha sabab ay dukaanka uga adeegtaan waxayna sidoo kale siisaa macaamiisha ujeeddooyin ay ku tijaabWiyaan alaabta cusub ee shirkadda.